Isevisi yangemuva kokuthengisa - i-Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Ukuhlunga kwe-Air Compressor
Isihlukanisi samafutha omoya
I-Air Compressor Lubircant
Izinto Ezisetshenziswa Ngemva Kokwelashwa Zomoya Ocindezelekile
I-Dessicant Air Dryer
I-Air Dryer Eqandisiwe
Isici sesihlungi se-Air Compressor
Ukugcinwa Kwesihlungi Somoya
Ukukhetha Isihlungi Somoya
Inqubo Yokusebenza Yokushintsha Isihlukanisi Somoya
Indlela Yokuhlanza Yesihlungi Samafutha ECompressor Yomoya
I-Compressor Oil Filter Replacement kanye Nokugcinwa
Indlela Yokukhetha Isihlungi Samafutha
I-Ingersoll Rand Air Compressor Filter Maintenance
Inkomba yokusebenza ye-Air Compressor Air Filers
Izinyathelo zokuqapha ze-Air Compressor Air Oil Separator
Q1: Yini ezohlinzekwa ngesevisi yangaphambi kokudayiswa?
I-A1: Ngaphezu kombuzo wenombolo yengxenye yomkhiqizo, siphinde sinikeze imingcele yezobuchwepheshe yomkhiqizo. Nge-oda lokuqala, isampula lamahhala elilodwa noma amabili anganikezwa ngaphandle kwenkokhiso yokuhamba.
Q2: Kuthiwani ngesevisi yokuthengisa?
A2: Sizokhetha ezokuthutha ngezindleko ezincane zamaklayenti. Kokubili umnyango wophiko lwezobuchwepheshe kanye nokuqinisekisa ikhwalithi uzonikezwa umdlalo ogcwele, ukuze kuqinisekiswe imikhiqizo yekhwalithi ephezulu. Abasebenzi bethu abathengisayo bazokugcina unolwazi ngenqubekelaphambili yezokuthutha. Ukwengeza, bazobhala futhi baphelelise idokhumenti yokuthumela.
Q3: Side kangakanani isikhathi sokuqinisekisa ikhwalithi? Kuyini okuqukethwe okuyinhloko kwesevisi yangemuva kokuthengisa?
I-A3: Ngokwesisekelo sendawo evamile yohlelo lokusebenza namafutha enjini amahle:
Isikhathi sewaranti yesihlungi somoya: amahora angu-2,000;
Isikhathi sewaranti yesihlungi samafutha: amahora angu-2,000;
Isihlukanisi Samafutha Omoya Wohlobo Lwangaphandle: amahora angu-2,500;
Isihlukanisi Samafutha Emoyeni Esakhelwe ngaphakathi: amahora angama-4,000.
Ngesikhathi sesiqinisekiso sekhwalithi, sizoyishintsha ngesikhathi esifanele uma abasebenzi bethu bezobuchwepheshe behlola ukuthi umkhiqizo unezinkinga ezinkulu zekhwalithi.
Q4: Kuthiwani ngezinye izinkonzo?
I-A4: Iklayenti lihlinzeka ngemodeli yomkhiqizo, kodwa nokho asinayo imodeli enjalo. Ngaphansi kwalesi simo, sizothuthukisa imodeli entsha yomkhiqizo uma i-oda elincane lifinyelelwa. Ngaphezu kwalokho, sizomema amaklayenti ngezikhathi ezithile ukuthi avakashele ifekthri yethu futhi athole ukuqeqeshwa okufanele kwezobuchwepheshe. Futhi, singakwazi futhi ukufinyelela kumakhasimende futhi sinikeze izikhathi zokuqeqeshwa kobuchwepheshe.
Q5: Ingabe isevisi ye-OEM iyatholakala?
© Copyright by Airpull 1996-2018 : Wonke Amalungelo Agodliwe.